Akụkọ - 2020 Septemba Wenzhou International Optical Fair
A ga-eme 18 Wenzhou International Optical Fair (WOF 2020) na Wenzhou International Convention and Exhibition Center site na Septemba 18 ruo Septemba 20, 2020!
Ọnụ ọgụgụ nke ihe ngosi a ga-erute mita 30,200 nke ngosi ngosi, yana karịa ụlọ ọrụ 410 si Guangzhou na Shenzhen na Guangdong, Xiamen na Fujian, Danyang na Jiangsu, Xinhe na Hebei, Yujiang na Jiangxi, Rongchang na Chongqing, Cangxi na Sichuan, Linhai na Yuhuan na Zhejiang, na Ouhai na Wenzhou. The mba iko ụlọ ọrụ ụyọkọ dị ka Ruian na Ruian gbakọtara, na ụlọ ọrụ si Shanghai, Shaanxi, Ningbo, Zhejiang, Foshan, Guangdong na ebe ndị ọzọ sonyeere nkwado.
Ihe ngosi a gụnyere igwe anya, ugogbe anya anwụ, iko egwuregwu, iko ụmụaka, iko agụ, anya m na oghere, iko iko, akụrụngwa na ihe inyeaka na ngwa, ngwaọrụ pụrụ iche, akụrụngwa akụrụngwa, ngwa ngwa ngwa na akụrụngwa, anya kọntaktị na ngwaahịa nlekọta, iko iko plating akụrụngwa. na akụrụngwa, wdg. Ebe ngosi ahụ mekwara ebe ngosi maka ndị na-ese ihe na China na ndị si mba ọzọ, ebe ngosi maka ugogbe anya na ugegbe nchedo, mpaghara enyo ndụ, yana mpaghara ọrụ ndị na-ege ntị iji mepụta kọntaktị azụmaahịa ọkachamara na usoro mgbanwe ozi maka ụlọ ọrụ mkpuchi anya.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ụlọ ọrụ ọdịda, Wenzhou International Optical Fair achịkọbarala ọtụtụ data na-azụ ahịa data, ngwa anya ụlọ ahịa data, mba yinye enterprise data, na-achịkọta nnukwu data nke ndị na-azụ na mba ngwa anya ụlọ ọrụ. Wenzhou International Optical Fair ga-eji oku ekwentị, ozi ederede, ozi ịntanetị, na mgbasa ozi n'èzí. , Mgbasa ozi n'ịntanetị, nkwalite mgbasa ozi na ọwa ndị ọzọ iji ruo ndị na-azụ ahịa ma nye ndị na-egosipụta ihe ngosi azụmahịa kachasị dabara.
Ndị na-emepụta akwụkwọ mbụ na ụdị si Italy, Germany, Canada, wdg so na ya. Mgbe nyochachara siri ike, a họpụtara ngwaahịa kachasị mma nke dabara adaba na ngosi nke ngosi ahụ iji mepụta oriri ngosi mba ụwa.